QAYBTII 3AAD EE XARAFKA UGU HOREEYA MAGACAAGA AYAA SHEEGAYA DABEECADDAADA IYO QOFKA AAD TAHAY: - Haldoornews
Waxaanu si taxane ah akhristayaasha ugu soo gudbina doona dabeecadaha ay khubarada cilmigu bulshadu sheegeen in lagu garan karo qof kasta iyada oo la eegayo xarafka koowaad ee uu magaciisu ka bilowdo. Haddaba anagoo tixgelinaya akhristayaal xiisaynaya inay ogaadan magacyadooda iyo waxay daaran yihiin, ayaanu si taxana idinku kaga soo gudbin doona shabagada Haldoor news.com waana Qaybtii 3aad
Xarafkani waxa uu astaan u yahay hibo ah karti badnaan jidheed iyo mid caqliyeedba. Marka ay Khayrka noqotana waxa laga arkaa in uu qayrkii uga dheereeyo. Laakiin nasiib darro kartidaas ku abuuran inta badan ugama faa’idaysto sida habboon iyo khayrka.
Waxa uu leedahay dareen jacayl, waxa uu aaminsan yahay jacaylka iyo xidhiidhka kalgacalka ku dhisan sidaa awgeed si fudud ayuu ugu guulayasataa xidhiidhka dadka. Waa qof lagu hirto laakiin jacaylka aaminaaddiisa heerka uu ka taagan yahay aad uma sii buurna, sidaa awgeed kama maarantid in lagula garab taagnaado kalgacal iyo jacayl dheeraad ah. waxa aad tahay dadka jecel is miidaaminta iyo isku dayga wax kasta dhibta uu doono ha yeesho ee.
Xarafka K waxa u astaan ah Sir qarin xad dhaaf ah. Gooni socodnimo kama madhna, waa xaraf ay khajilaaddu ku badan tahay. Waa qof leh weji iyo dabeecad dadka soo jiita, waxa xaraf xasaasi ah, caadifad badan. Wanaagiisu waa marka uu la macaamilayo asxaabsta ay aad isugu dhow yihiin.
Waa xaraf ay ku jirto caqliyad ganacsi, marka ay ku dhac iyo geesinimo tahayna waxa lagu yaqaanna dhiirannaan iyo khibrad. Waa xaraf ay u suurtowdo in uu jilo iskana yeel-yeelo xalad kasta, taas macnaheedu waa in aanay ka madhnayn khiyaamo.
Qofka magaciisu xarafkan ku bilowdo waa aynu ka filan karnaa in uu khiyaameeyo jacaylka. Laakiin haddana laga filo in uu ku dheel-dheelo cidda ka ag dhow. Waa qof saaxiif fiican noqon kara, laakiin ceebtiisu waa in aanu wanaagga iyo kartida ku jirta naftiisa isagu aqoonsanayn.
Siddeed Talabo Oo Ka Cawinaya Mustaqbalka In Uu Ilmahagu Noqda Qof Masuuliyadisa Garta